Usuku My Pet » Can Pet Komzimba and Dating babeyinto eyodwa?
Ngakho, usuthole umuntu ofuna ukumazi kangcono. Uma ukhuluma nabo, kungakhathaliseki-umuntu noma online, kukhona smile ebusweni bakho. You feel that things couldn’t get any better than they are, bese uthola ukuthi banalo isilwane ukuthi wena iguliswa. Yini umuntu ukuba enze? Ingabe kudingeka ithawula ngobuhlobo ngenxa yokungezwani komzimba wakho? Ingabe zikhona ezinye izindlela ukuze kungabi ebona umuntu aphinde? Kubantu abaningi, bangu.
Okokuqala nokusemqoka, ake umuntu azi ukuthi une yokungezwani komzimba. Lokhu kubalulekile ukuba nobuhlobo nokwethembeka (ukuze siqale), futhi bangase bakwazi kunciphe ukusabela ukuthi une. Bangakwenza kanjani lokhu? Bangaqiniseka uma egqoke izingubo fresh ngaphambi kosuku lwakho (abangenalo ukuxhumana pet emva kokuba wagqoka). Ukwengeza, bangaba ibhulashi Lint noma into efanayo ukusebenzisa nekafikako for usuku lwakho (if their pet rides in the car and there is a transfer from the car to their clothes).
Le ndawo elilandelayo kugxilwe ukwazi kobukhulu yokungezwani komzimba wakho. Ingabe uthatha OTC yokungezwani komzimba imithi futhi bakwazi ukusingatha kusihlwa? Noma ingabe unayo ukusabela severe ukuthi lizodinga EpiPen? Kulabo edinga EpiPen, uzodinga ukuhlola ubuhlobo on a ezingeni omkhulu, because literally, your health is at risk. Kwabanye, ungakwazi nje uqiniseke ukuthi uthathe imithi yakho yokungezwani komzimba ngaphambi kokuthola ndawonye nabo, bese ukuqapha indlela osabela ngayo njengoba ebusuku kuqhubeka.
Uma uchitha isikhathi endaweni yabo, bangakwazi wamisa ekamelweni lapho pet akuvunyelwe. Njengoba i layer wanezela of ukuvikelwa, bangaba umshini ukusefa running ukugcina nomzimba out of the air. Kukhona imikhiqizo eminingi ukuthi kukhona emakethe ukuba ogulayo komzimba. Lezi imikhiqizo ngeke inciphise dander in the air, noma ukusebenza njengesithiyo kumalayisensi ukugcina nomzimba ukungena isikhala designated.
Ngokuba abaningi abanale nkinga yokungezwani komzimba, bayohlala kakade lezi extras nabo, kodwa ngeke ubuhlungu ukuphinda kubo. Qiniseka ukuthi njalo ube izicubu ngakwesokunene. Uma une komzimba abangela silume, Amehlo akhalayo and more, ungase uzizwe ayikhangi kangako usuku lwakho uma ikhala lakho njalo egijima noma kubukeka sengathi ubulokhu ekhala. Ungaba ezinye iso yokungezwani komzimba lehla nawe kanye. This will not only help flush the allergens from your eyes but will also help with the redness and irritation that will be present.
Ingabe komzimba wakho kukwenze ukukhwehlela? Ukukhwehlela amaconsi nomphimbo lozenges kubalulekile ukuze ube kwanciphisa nokucindezeleka date. How many times have you gotten a tickle in your throat and the more you cough the drier your throat gets? Abanye lozenges noma ngisho candies kanzima Ungongeza umswakama nje ngokwanele ukuthatha ukuhlekisa away and elingenamikhono umphimbo wakho ukuze ukwazi ukugxila usuku lwakho.
With evulekile, nokukhulumisana a nokulungiselela kancane, usengakwazi nobuhlobo kujabulise ngisho noma unayo i yokungezwani komzimba ukuze isilwane yabo.